Akhriso Taariikhda Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Akhriso Taariikhda Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur
Akhriso Taariikhda Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur
Sheekh Mukhtaar Abuu-Mansuur oo dadka u yaqaanaan Roobow ayey Mareykanka ka saareen liis ay dul dhigeen lacago malaayiin ah, liiska waxaa ka mid ahaa 6 kale oo ka tirsan madaxda Al-shabaab, waxaa xusid mudan in Roobow aan marnaba ka mid noqon liiska argigixisada uu Mareykanka soo saaray.
Hadaba, Waa Kuma Sheekh Mukhtaar Roobow:
Sheekh Mukhtaar Abuu-Mansuur illaa hadda waxaa uu ku magacaaban yahay guddoomiye ku xigeenka xarakada Al-shabaab, waxaa uu ku jiraa aasaasayaashii Xarakada, isaga oo ka soo jeedaa beesha Leesaan oo ka tirsan Digil iyo Mirifle ee degta gobollada Bay iyo Bakool.
Inta aan loo magacaabin Guddoomiye ku-xigeenka Xarakada Al-shabaab, waxaa uu muddo ahaa afhayeenka Al-shabaab, dalka Mareykanka ayaa sida aan soo sheegnay bishii June 6, 2012-kii ku daray liis la dul dhigay lacag.
Mareykanka waxaa ay sheegeen in $7 Milyan dul dhigeen aasaasaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane, $5 Milyan ragga kala ah Ibrahim Xaaji Jaamac, Fu’aad Maxamed Khalaf, Bashiir Maxamed Maxamud iyo Mukhtaar Roobow halka $3 Milyan la dul dhigay Zakariye Ismaaciil Xersi iyo Cabdullahi Yare.
Tillaabada Mareykanka kadib, Abuu Mansuur Roobow oo ka hadlayey masjid uu salaadda jincaha ku tukaday oo ku yaalo Buur-hakaba waxaa uu sheegay in aanu iska qari doonin Mareyaknaka, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa “Aw Mareykanka aniga waxaa jooga Buurhakaba, Masaajidka ayaa salaadii jimcaha ku dukaday, jimcihii hore waxaa ku dukaday Tiyeeglow”.
Bilowgii Xarakada, Mukhtaar waxaa la sheegaa in Xudur iyo gobollo badan oo Koonfurta Soomaaliya ah uu ka sameeyay xerooyin dadka lagu tababaro, waxaa kale uu isaga ka mid ahaa koox tababar ku soo qaadatay dalka Afgaanistaan.
Mukhtaar Robow waxaa ay isku dhaceen madaxii Al-shabaab Axmed Godane taasi oo keentay in lagu weeraro guri uu ka deganaa degmada Baraawe kadibna uu u baxsaday gobollada Bay iyo Bakool.
3dii sano ee ugu dambeysay waxaa hayey maleeshiyaad beeshiisa ah, waxaana sidoo kale muuqata in uu wada hadal la galay maamulka Koonfur Galbeed iyo dalka Mareykanka, tilaabadan looga laabtay lacagta la dul dhigay waxaa ay soo dedeji kartaa in uu dowladda federaalka ah isku dhiibo.
Al-shabaabta kale: Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur wixii ka dambeeyay 2013-kii waxaa uu ka mid ahaa Al-shabaabta aan raacsaneen Axmed Godane.
Kooxdan waxaa ku jiray Ibraahim Afgaan, Abuu Mansuur Al-Amriikii, Sheekh Xasan Dahir Aweys iyo qaar kale, waxaa ay Xarakada Al-shabaab uga goosteen Shabeellada hoose, qaarkood magaalada Marka ayey doon ka raaceen, qaarna Baraawe iyo Mukhtaar Roobow oo aadey dhulkii uu ka soo jeeday.